Mampatavy antsika ny manodidina antsika
Ny olon-drehetra no manosika antsika hatavy. Nefa inona no mahatonga an’izany ho manan-danja ?
1) Areti-mifindra ny fihetsika tsy mendriky ny manodidina antsika
Satria isika miaina eo anivon’ny fiaraha-monina, dia mila manana fihetsika izay manampy antsika mba hiara-monina am-pifaliana miaraka amin’ny hafa. Anisan’izany fomba izany ny empathie, na ny fahaizana mahatsapa ny fihetsehampon’ireo izay tiantsika. Noho ny empathie dia azontsika hatao ny mi-influencer ny hafa ary azon’ny hafa hatao ny mi-influencer antsika.
Noho izany, raha misy olona izay tianao ao amin’ny manodidina anao ka te hipetraka any Frantsa, mety hiova hevitra tsikelikely ianao, lasa te hiaina any ihany ko. Amin’izay fotoana izay, fangalahantahaka tanjona no resahina.
Raha misy mpiara-miasa aminao izay mahafinaritra anao, mijaly satria ampijalian’ny sefony (izay sefonao ihany koa), mety hahatsapa tsikelikely ianao fa mampijaly anao ihany koa ny sefonareo. Amin’izay fotoana izay, fangalahantahaka ny tsapa no resahina.
Raha misy mpiara-mianatra aminao, izay tianao, mihinana ny sakafony lanaraina amin’ny 10 ora maraina, mandritra ny récréation, dia hiova tsikelikely ianao ka lasa hihinana ny sakafonao maraina amin’izany ora izany koa. Amin’izay fotoana izay, fangalahantahaka fahazarana sy fihetsika no resahina.
Nefa tsy mangalatahaka raha tsy ny olona izay manodidina antsika isika ary izay tiantsika ihany, na izay olona izay hajaintsika, na mahafinaritra antsika. Izany hoe tsy mangalatahaka raha tsy ny olona izay manan-danja ho antsika isika.
Izay no antony mahatonga ny vehivavy mihamatavy rehefa mitokan-trano miaraka amin’ny olon-tiany : mangalatahaka ny fatran-tsakafo hanin’ny olon-tiany izy. Nefa fantantsika fa ny lehilahy dia mila sakafo bebe kokoa noho ny vehivavy. Noho izany, miohatra ny ilain’ny vatany ny sakafo hanin’ireny vehivavy ireny satria mihinana be loatra izy.
HADIHADIO NY OLONA IZAY ALAINAO TAHAKA AMIN’NY MANODIDINA ANAO
Mba hahalalanao hoe voan’ny terin’ny fiaraha-monina ve ianao dia tanisao ny olona izay akaikin’ny fonao rehetra.
Afaka mi-influencer ny eritreritrao, ny fahazaranao ary ny fihetsikao ireo olona ireo.
Hafiriana ny fotoana niarahanao tamin’ireny olona ireny ?
Hajainao ve ireo olona ireo ?
Tsapanao fa mitovy ve ianareo ?
Manan-danja aminao ve ny hevitr’ireo olona ireo ?
Matoky ireo olona ireo ve ianao ?
Mampitaintaina anao ve ny manjo an’ireo olona ireo ?
Ny olona izay akaiky kokoa ny fo no tena misy influence amin’ny hevitra, fahazarana ary fihetsika.
HADIHADIO NY INFLUENCE HANANAN’NY FIARAHA-MONINA AMINAO
Misy olon-kafa ve amin’ny manodidina anao izay mitovy tanjona aminao ? Oh : Te hihena izy, te hanena ny habean’ny kibony, te hanena ny habean’ny feany, …
Mety hoe nangalatahaka ny tanjon’ireny olona ireny ianao. Izany hoe, tsy tena tanjonao akory izany.
Mangalatahaka ny fahazaram-pisakafohanan’ny olona sasany amin’ny manodidina anao ve ianao ? Oh : mihinana goûter amin’ny 10 ora maraina, mihinana gaufres amin’ny atoandro, tsy misotro rano, …
Mety mampatavy anao ireny fahazarana ireny. Ary tsy tonga saina akory ianao fa tsy ianao no diso.
Iza amin’ny manodidina anao no nangalatahaka ny tanjonao ?
Manana influence amin’ireo olona ireo ianao satria akaiky ny fony ianao. Mety hangalatsahaka ny hevitrao, ny fahazaranao ary ny fihetsikao izany ireo olona ireo.
Inona no fomba fisakafohanan’ny manodidina anao izay alainao tahaka ?
Misy fiantraikany ratsy amin’ny tanjonao ve ireo fihetsika ireo ?
Tsy fihetsikao manokana ireo fihetsika ireo. Vokatry ny influence sociale ireo. Noho izany, tsy misy zavatra tsy mety izany ao aminao fa olombelona fotsiny ianao.
Misy olona ve izay rehefa iarahanao dia mahatonga anao hihinan-kanina be foana ? Oh : Rehefa miaraka amin’ny sipako aho dia mihinana nem sy sambos be dia be foana.
Na manana fomba fisakafohanana tsy normal ireny olona ireny (mihinan-kanina nefa tsy noana), na raha tsy izany, mila sakafo be dia be izy. Misy influence be loatra aminao ireny olona ireny.
2) Tiantsika ny hanaraka ny lamaody : ho mahia
Andao hianatra tantara kely :
Tamin’ny Ejipta taloha, ny tian’ny vehivavy dia ny manana vatana mahia nefa misy hozatra, ary ngeza valahana raha oharina amin’ny hanches. Tsy lamaody izany ny valahana kely.
Tamin’ny Antiquité, nila nanana ny proportions tonga lafatra, nila nanana bika tsara rafitra. Noforonina ny kotrana mba handrafetana ny vatana. Ny statues no mampiseho ny vehivavy tonga lafatra : kely nefa be fe, sy be sandry, kibo fisaka ary misy hozatra. Ny lehilahy natavy dia noheverina fa lehilahy manan-karena, ary ny hatavezan’ny vehivavy dia neverina ho tsara bika. Nefa ny obésité dia nampifandraisina tamin’ny fahakamoana.
Tamin’ny Moyen-âge, ny tsara bika dia ny vehivavy lava, blonde, lava tenda ary manana ratsan-tanana manify. Ny obèses dia noheverina fa tsy mihetsiketsika, sady mpanota noho ny herin’ny fiangonana tamin’izany. Noampangaina fa kamo, sady tendan-kanina no tia harena ny olona obèse.
Tamin’ny Renaissance, nofaritana ny proportions tsara ho an’ny vatana. Tamin’izany fotoana izany, ny valahan’ny vehivavy dia nanify kely, tsy misy bourrelet. Nanana kibo fisaka izy ireo noho ny corsets izay mampifitsaka ny valahana. Nefa mampivelatra ny hanches, izay nolazaina fa maha-vehivavy ny vehivavy.
Tamin’ny XVIIème siècle, natoraly kokoa ny vehivavy, tsy manao corsets intsony fa manao akanjo izay mampiditra ny kibo izay mampiseho ny bikan’ny vatany.
Tamin’ny XIXème siècle, dia natavy ny vehivavy. Ny vehivavy tsara dia natavy sy nisy formes.
Tamin’ny XXème siècle, tamin’ny taona 1900, niverina nanao corsets indray y vehivavay ary nafenina ny tavy.
Tamin’ny « années folles » (1920), taorian’ny ady lehibe voalohany, lasa lamaody ny manana vatana mitovy amin’ny lehilahy. Mila manana kibo sy fitombenana fisaka, sandry be hozatra ary tongotra manify.
Tamin’ny 1930 no teraka ny congés payés voalohany, izany hoe ny fialan-tsasatra any amin’ny moron-dranomasina, nampiseho vatana teny amoron-dranomasina ny vehivavy ary tsy maintsy tsara bika. Tamin’izay no niatombohan’ny culte de la minceur. Tsy maintsy mahia ny vehivavy satria izany no ahitana fa tsara tarehy ianao.
Tamin’ny 1950, taorian’ny ady lehibe faharoa, ny olona marary no mahia kely. Mba hanarahana ny lamaody, mba ho hita hoe tena vehivavy ary ho hita hoe tsara bika, dia niverina natavy ny vehivavy.
Tamin’ny taona 1960, niova ho fahiazana tanteraka ny lamaody satria noforonina i Barbie, ilay saribakoly manana proportions tonga lafatra. Mba hitovizana aminy dia niova ny mahatsara ny vehivavy.
Ankehitriny, mbola mahita izany finoana izany isika any amin’ny olona ngeza. Satria dieny mbola kely dia efa ampianarina ny ankizy hampifandray ny obésité sy ny haratsiam-bika, ny hakamoana, ny tsy fahaizana, sns. Namafisina ilay finoana hoe ny olona obèses dia mahantra, kamo, marary ary tsy faly.
Lasa lamaody ny fahihiazana, tsy maintsy manify ny vatana, raha ny lalàna no arahina. (Les origines du régime).
Eto Madagasikara, tsy mazava tsara ny fahitantsika ny olona matavy :
etsy andaniny, ampifandraisina amin’ny harena sy ny fahasalamana ny hatavezana ;
nefa etsy andaniny ampangaina ho kamo izy ireo. Miampy an’izay koa ny finoana ara-pivavahana izay mampanga an’izy ireo ho tendan-kanina, kamo ary tia harena.
Ny olona mahia indray anefa :
etsy andaniny enjehina satria heverina fa mahantra na olona marary, farofy ;
ary etsy an-kilany, iriana satria heverina fa olona mazoto sy mahavita.
Ireny fiheverana sy finoana avy amin’ny fivavahana, ny razambe, … ireny dia nampianarina antsika mba hanarahantsika ny modely izay napetraky ny fiaraha-monina raha tsy izay isika dia voatondro-molotra hoe « tsy normal » na « ratsy tarehy ». Modely izay tsy mazava tsara akory : mahia nefa tsy mahantra na marary, na matavy nefa tsy kamo sy tendan-kanina. Izay no atao hoe culture de la minceur.
HADIHADIO NY FINOANAO MOMBA NY OLONA MATAVY SY MAHIA
Amin’ny ankapobeny, ahoana ny ahitanao ny olona matavy ?
Na manosika anao hatahotra ny hatavy ireo finoana ireo, na manosika anao te hatavy. Mety ho marina ary mety ho diso ireo finoana ireo.
Amin’ny ankapobeny, ahoana ny ahitanao ny olona mahia ?
Na manosika anao hatahotra ny hahia ireo finoana ireo, na manosika anao te hahia. Mety ho marina ary mety ho diso ireo finoana ireo.
Avy aiza ireo finoana ireo, araka ny hevitrao ?
Manana influence aminao ireo olona ireo. Afaka ny mi-influencer ny hevitrao izy ireo.
HADIHADIO NY INFLUENCE AN’NY CULTURE DE LA MINCEUR EO AMINAO
Misy fotoana ve ianao mihevitra fa tsy misy dikany ny tanjonao satria tsy mifanaraka amin’ny tadiavin’ny be sy ny maro ? Oh : Matavy daholo ny olon-drehetra, te hihena ianao, tsy misy dikany ve ny tanjonao ? Na Te hatavy daholo ny olon-drehetra ary te hihena ianao. Tsy misy dikany ve ny tanjonao ?
Raha « eny » ny valinteninao dia tianao ny hitovy amin’ny heverinao hoe tian’ny olon-drehetra. Tsy voatery hoe ohatr’izay tokoa ny olon-drehetra. Raha « tsia » ny valinteninao dia mety tianao ny manao izay mifanohitra amin’ny tadiavin’ny olon-drehetra. Na izay marina no tena tadiavinao.
Misy olona « adala » ve mba mitovy fihetsika amin’ilay fihetsika tianao hananana ? Oh : olona izay mihinan-kanina nefa tsy manamelo-tena nefa salama tsara, …
Raha misy « adala » izay mitady izay tadiavinao ihany koa, dia normal izany ny tanjonao. Satria tsy ny olon-drehetra no te [fenoy amin’izay heverinao fa tian’ny olon-drehetra]. Misy olona mba mitovy aminao ihany.
3) Manaparitala ny modely ny medias mba hahazoany tombontsoa
Noho ny fitadiavan’ny vehivavy fatratra ny fahihiazana, nahita fomba mamoka-bola be ny sasany : ny régimes sy ny produits amincissants. Sady tsy terena ny vehivavy, ary amin’izao ny lehilahy ihany koa, fa safidiny manokana ny manao an’izany. Mba hahazoana ny « normalité ».
Noho izany, feno sarin-tava namboarina tamin’ny Photoshop ny réseaux sociaux izay faran’izay tiantsika (facebook, instagram, snapchat, ...), mba hampahatsiahivana antsika tsy an-kiato fa tsy mifanaraka amin’ny modely tokony harahina isika. Feno torohevitra mampahia na mampihena ny magazines natokana ho an’ny vehivavy. Mba hanovany ny endriny, mba hanatsarany ny bikany sy ny tarehiny, … izay midika hoe ny vehivavy rehetra dia matavy sy ratsy tarehy/bika. Fampahatsiahivana tsy an-kiato fa tsy mifanaraka amin’ny atao hoe « normal » isika. Mahakasika ny tanora ihany koa ireny dokam-barotra ireny, miaraka amin’ny saribakoly manana vatana « tonga lafatra » izay deraina any amin’ny fivarotana. Tsy misy miraharaha intsony ny saribakoly izay manana bika mitovy amin’ny ankizy.
Mba ho « normal » isika dia aleontsika ny mamolavola ny vatantsika araka ilay modely : fitombenana boribory sy tsy mitarozaka, nono tsy mitarozaka, kibo fisaka, hanches sy fe ngeza, valahana manify, … Tsy maintsy ariantsika ny mampiavaka ny vatantsika : ny bikantsika. Fa pâte à modeler ve ny vatantsika ?
Nefa ireny médias ireny ihany no manosika antsika hividy sy hihinana vokatra izay tsy ilaintsika akory amin'ny fampiasana ny " terror management ".
« Soa ihany » fa manome vahaolana amin’ny « olantsika » ny médias : ny régimes, ny produits amincissants ary ny kotrana. « Andramo hosorana amin’ny kibo sy fe anie ito crème ito dia ho lasa normal ianao ao anatin’ny fotoana fohy. », « Sotroy isan’andro ito dite ito fa hanomboka hadio ny tarehinao sady ho tsara tarehy ianao, ka ho normal amin’izay ianao » na « Toa anao i Rindra taloha, sady ratsy tarehy no ratsy bika, noho ny nanao régime 2 à5 izy sady nikotrana niaraka tamin’ny coach certifié Haja, dia nivoatra avy tamin’ny paozina sahona izy dia lasa mpanjaka vavy. Tongava manoratra anarana dieny izao fa ho hitanao fa mahafinaritra ny normal » …
INONA NO ATAO HOE « TERROR MANAGEMENT » ?
Miara-monina amin’ny hafa ny olombelona. Raha misy manjo ny olombelona hafa, na tsy fantany aza izany olona izany, dia misy fiantraikany aminy izany loza izany. Oh : raha tantaraiko anareo ny nahazo izay lehilahy iray izay : nandeha mission izy. Nijanona tao an-trano ny vadiny sy ny zanany 2 (vavy sy lahy) ary mpanampy. Indray alina, nisy namaky ny trano dia nohidian’ny mpangalatra tao an’efitra ny fianakavian’ilay lehilahy miaraka amin’nilay mpanapy. Ary nodorany ny trano. Niantso ny vadiny ilay vehivavy, ary nampandre ny gendarmes ilay lehilahy. Nefa, taraiky loatra ny gendarmes. Voadoro velona tao an-trano izy mianakavy kely. Tsy tohina tamin’iny tantara iny ve ianao ? Mety nihovitrovitra mihitsy aza ny sasany. Mampahatsiahy anao iny tantara iny fa malemy ny olombelona ary tsy ho fantatra mialoha hoe rahoviana izy no ho faty. Ka mampieritreritra anao hoe « Fa maninona aho no mampijaly tena eto an-tany nefa mety ho faty rahampitso aho ? Mila manararaotra ny fiainako dieny izao aho ! ». Izay no manosika antsika hanararaotra ny fiainantsika amin’ny fihinanan-kanina izay hampiato ny tebitebin-tsainao. Fihetsika izay tsy nataonao raha tsy nahare iny tantara iny. Nefa tsy maharitra ela ny vokan’iny tantara iny. Tsy maharitra andro iray, fa minitra vitsy fotsiny.
Ohatra izay ny manipulation ataon’ny haino aman-jery amaintsika. Nahatsikaritra ve ianao fa tia vaovao ratsy isika ? Ny vaovao an-tsary na gazety rehetra dia tsy maintsy mitantara farafahakeliny vaovao ratsy roa, ary tsara kokoa raha zava-doza. Mahafaly ny haino aman-jery ny mampiseho sary sy vidéos mampihorohoro sy feno rà. Oh : ilay niseho tany Ambohipo, tamin’ny nisian’ny jiolahy namaky ny Telma Shop.
Rehefa tafaverina amin’ny mpanolotra ny vaovao ny sary, dia miresaka momba ilay famonoana ny jiolahy izy ireo. Dokam-barotra kely : karazan-tsakitsaky, régimes, … Tampoka teo, te hihinan-kanina ianao : na ilay tsakitsaky hitanao tain’ny dokam-barotra, na zavatra hafa. Tianao ovaina ny eritreretinao, hanadino ny sary nampihorohoro anao.
Noho izany, ny « terror management » dia fomba entin’ny haino aman-jery hampahatsiahivana anao fa malemy ianao amin’ny fampisehoana anao vidéos na sary mampihorohoro mba hanambatambazana anao amin’ny alalan’ny « vahaolana » : ny vokatra ataony dokam-barotra.
Misy fotoana, manosika antsika tsy hanao na inona na inona ny terror management noho ny alahelontsika. Oh : tsy manao fanatanjahantena, mandeha matory, tsy te hanao na inona na inona, …
HADIHADIO NY INFLUENCES HANANAN’NY HAINO AMAN-JERY
Inona avy ny dokam-barotra izay mandeha aorian’ny vaovao an-tsary ?
Ny vokatra izay atao dokam-barotra aorian’ny vaovao an-tsary no vokatra izay mety ho tadiavinao.
Misy hifandraisany amin’ny tanjonao ve ireny vokatra ireny ? Oh : régimes, sakafo, zava-pisotro, salle de sport, matériel de sport, …
Rehefa tsy te hikotrana ianao, sao dia mandositra ny hevitra hoe malemy ianao ary mbola ho faty indray andro ? Oh : « Tsy te hanao zumba aho satria tsy haharaka ny fihetsiky ny coach indray aho izao. » na « Tsy hikotrana aho satria tsy hahavita ny hihazakazaka mandritra ny adiny 4 akory. » na « Tsy hikotrana aho satria tsy misy dikany avy izany, mbola ho faty ihany aho na dia hikotrana aza. »
Manakana antsika hanao zavatra izay hahazoantsika zava-tsoa ny fahatahorana ny fahalemena (mora maty, tsy fahavitan-javatra, …).
4) Ny lanjan'ny endrika ivelany
« Zava-boahary mifandray amin’ny hafa ny olombelona », « Tsy nosy ny olombelona », nianatra an’izany isika tamin’ny filozofia tamin’ny kilasy voalohany na famaranana. Tsy miaina irery izany izy.
Te hanery antsika hanaiky modelin’ny hatsaram-bika ny fiaraha-monina : tsy maintsy mahia ianao raha te ho normal, ny olona matavy dia [tanisao eto ny toertra ratsy rehetra izay fahenonao momba ny olona matavy].
Noho izany, manahirana ireo rehetra izay tsy mitovy amin’ny modelin’ny hatsaram-bika (mahia) ny fahatahorana ny ho irery, ny ho voahilikilika, ny ho voatositosika, na ny ho voatondro-molotra.
Nefa tsy mifanaraka amin’ny tena misy ireny modely ireny, ka zara raha misy ny olona izay mitovy amin’ireny (anisan’izany ny olona izay afaka nanao chirurgies esthétiques)
Noho izany, tratran’ny complexes sy fahamenarana ny ankabeazany satria mihevitra izy fa tsy normal, ratsy bika, na toa ny biby mampitahotra.
Iza no hitia olona ratsy bika na biby mampitahotra ? Tsy misy fanafany izany fa tsy maintsy mitady « vahaolana » izany isy mba ho « normal ».
Izany tranga izany dia notsikerain’ilay mpihira rap frantsay : Tunisiano tao amin’ny hirany mitondra ny lohateny hoe « Le regard des gens ». Indro ary misy sombin’izany hira izany :
Oui, elle est pleine de grâce,
Mais son reflet dans la glace l’a rendu
Si différente des autres.
Elle se sent mise à l'écart.
Qu’elle peut lire dans le regard des autres.
Elle se sent si seule, si laide.
C’est qu'elle s'est demandée de l'aide.
Entre autres, elle fait partis de ces filles
Mal dans leur peau. Ces yeux qui les fusillent
Pour quelques kilos en trop.
Ces yeux qui la grugent, lui font croire qu'elle est difforme.
Tous ces regards qui la juge qui l’on rendu non conforme.
Elle ne cherche plus à plaire bêtement, elle cache ces rondeurs
Derrière ces larges vêtements. Peu féminine,
Complexée par son physique,
Devant ces magazines et ces filles anorexiques,
Son poids est un crime.Terrifiée par la foule,
Elle multiplie les régimes afin d'entrer dans le bon moule.
Pour soit disant faire partis des gens normaux.
Elle a perdu toute confiance en elle.
Elle qui a cru que l'apparence pouvait suffire pour être belle.
On fait semblant d'être heureux, de sourire pour se sentir mieux (Dans le regard des gens)
On se déguise, s’idéalise, c'est la perfection qu'on veut (Dans le regard des gens)
On fait semblant d'être heureux (Dans le regard des gens)
On se déguise ... (Dans le regard des gens)
Pour que les gens les aiment.
Seins en silicone et piqûre en collagène.
S’agrippent à des critères par peur d'être jugé.
A toutes ces femmes qui se montrent pour s'aimer,
A tous ces hommes qui se cachent pour pleurer,
Qui se cherchent pour ne pas se retrouver.
C’est vrai qu'on se sent mieux grâce au regard des gens.
C’est vrai qu'on se voit beau dans le regard des gens.
Avant d'être aimé par les autres il faut d'abord s'aimer soi-même. (Tunisiano)
Noho izany, mihorohoro isika rehefa mieritreritra fa mety ho irery, na voatositosika na voahilikilika, na voatondro molotra, na asitakin’ny fiaraha-monina. Ary nanomboka tamin’ny fahazazana teny anivon’ny fianakaviana izany tahotra izany. Matahotra ny ho tsy tian’ny ray aman-dreny intsony isika satria « ratsy bika » na « biby mampitahotra ».
HADIHADIO NY LANJAN’NY ENDRIKA IVELANY
Mahita ny vatanao ho tsara ve ianao ?
Ny fahitanao ny vatanao dia voafaritry ny fitiavana na fampijaliana nataon’ny ray aman-dreninao anao tamin’ny fahazazanao. Ny fitiavana dia mampihevitra anao fa tsara ny vatanao ary mendrika ny ho tiavina izany ianao. Ny fampijaliana indray mapihevitra anao fa ratsy ny vatanao ka mendrika ny ampijaliana ianao.
Menatry ny vatanao ve ianao ?
Menatry ny mampiseho faritry ny vatanao ve ianao ?
Menatry ny manao akanjo sasany ve ianao ? Oh : crop-top, bikini, maillots de bain, shorts, zipo, ambonin’ankanjo fohy tanana, …
Rahefa mihevitra ianao fa tsy mifanaraka amin’ny tokony ho izy ny vatanao (oh : kibo fisaka, fe manify, hanches mivelatra, mahia, taille 36 …), dia menatra ho azy ny vatanao ianao. Menatry ny ho « biby mampitahotra » izay voahilikilikin’ny fiaraha-monina ianao.
Manana modely mamaritra ny ataonao hoe tsara ve ianao ? Oh : Ny vehivavy dia tokony hanana kibo fisaka, fitombenana boribory, be nono, …
Mifanaraka amin’ny modelin’ny ataonao hoe tsara ve ianao ? Oh : Ny vehivavy dia tokony hanana kibo fisaka. Tsy manana kibo fisaka aho.
Raha tsy mifanaraka amin’ny modely izay mamaritra ny tsara ianao, mihevitra ny tenanao ho tsy normal ve ianao ?
Araka ny hevitrao, tsy normal ve ireo izay tsy mifanaraka amin’ny modely izay mamaritra ny tsara ?
Firy ny olona izay mifanaraka amin’ny modelin’ny ataonao hoe tsara ka efa hitanao teo amin’ny fiainanao ?
Araka ny hevitrao, ilaina ve ny mitovy amin’ireny modely ireny ?
Fa maninona ?
Ireny modely mamaritra ny hatsarana ireny dia noforonin’ny fiaraha-monina ary naparitaky ny haino aman-jery mba hanerena ny olona hanaraka izany amin’ny fanaovana zavatra izay mampanankarena ny sasany. Tsy mifanaraka amin’ny normal avy ireny modely ireny. Ny normal mantsy dia tsy tonga lafatra.
Araha ny hevitrao, ilaina ve ny normal ?
Efa nahatsapa fa voahilikiliky ny ray aman-dreninao ve ianao noho ny endrikao ivelany izay tsy nifanaraka tamin’ny faniriany, tamin’ny fahazazanao ? Oh : Sorena taminao ny rainao sy ny reninao satria matavy, mahia, obèse, kely, … ianao ho azy.Efa nahatsapa fa voahilikiliky ny mpiara-mianatra taminao ve ianao noho ny endrikao ivelany izay tsy nifanaraka tamin’ny modelin’ny hatsarana, tamin’ny fahazazanao ? Oh : Nampijalian’ny mpiara-mianatra taminao ianao satria matavy, mahia, obèse, kely, ...
Matahotra ny ho irery ve ianao ?
Matahotra ny ho asitaka ve ianao ?
Matahotra ny ho voahilikiliky ny fiaraha-monina ve ianao ?
Matahotra ny tsy hitovy amin’ny hafa ve ianao ?
Ny tahotra no fitaovam-piadiana entin’ny fiaraha-monina hanerena antsika hanaraka ny modelin’ny hatsarana izay tsy mifanaraka amin’ny tena misy. Ny tahotry ny ho tsy normal, ny ho toa ny « biby mampitahotra », ny ho irery, ny ho voatositosika, ny ho voahilikilika, na ny ho samihafa.